Atosɛm a Ama Onyankopɔn Nipaban Ahintaw​​—‘Nyame Mu Nnipa Baasa’
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luo Malagasy Maltese Myanmar Ngabere Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Urdu Uruund Uzbek Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
Kristosom “asɔre akɛse abiɛsa no nyinaa—Roma Katolek, Ortɔdɔks, ne Protestant—wɔn nyinaa gye tom sɛ yɛwɔ Nyame mu nnipa baasa: Nyame Agya, Nyame Ɔba ne Nyame Honhom Kronkron. Kristosom kyerɛkyerɛ sɛ saa gyidi no nkyerɛ sɛ yɛwɔ anyame baasa, na mmom baasa no nyinaa bom biako.”—The New Encyclopædia Britannica.
Onyankopɔn Ba Yesu anka da sɛ ɔne n’Agya bom biako. Mmom ɔkae sɛ: “Merekɔ Agya no nkyɛn, efisɛ Agya no yɛ kɛse sen me.” (Yohane 14:28) Afei nso ɔka kyerɛɛ n’asuafo no sɛ: “Merekɔ m’Agya ne mo Agya ne me Nyankopɔn ne mo Nyankopɔn no nkyɛn.”—Yohane 20:17.
Honhom kronkron nyɛ nipa. Kristofo a wodi kan no, “honhom kronkron hyɛɛ wɔn nyinaa mãmã,” na Yehowa kae sɛ: “Mehwie me honhom no bi agu ɔhonam ahorow nyinaa so.” (Asomafo Nnwuma 2:1-4, 17) Enti honhom kronkron nyɛ obi a ɔka Baasakoro bi ho, na mmom ɛyɛ tumi a Onyankopɔn de yɛ ade.
Katolek animdefo Karl Rahner ne Herbert Vorgrimler kyerɛkyerɛ Baasakoro no mu sɛ, “sɛ wɔanyi ankyerɛ obi a ɔrentumi nte ase, na sɛ woyi kyerɛ obi mpo a, ɔrentumi nte ase nwie.” Sɛ wuntumi nhu sɛnea obi te a, wubetumi adɔ no ama ayɛ yiye? Baasakoro nkyerɛkyerɛ no ayɛ osiakwan, enti nkurɔfo ntumi nhu Onyankopɔn yiye na wɔadɔ no.
Yɛkaa Marco ho asɛm wɔ asɛm a edi kan no mu; ohui sɛ Baasakoro nkyerɛkyerɛ no ayɛ osiakwan ama no. N’asɛm ne sɛ: “Ɛyɛɛ me sɛ Onyankopɔn de ne nipaban ahintaw me, na mihuu no sɛ ne ho yɛ hu na ɔwɔ akyirikyiri dodo, na merentumi mmɛn no.” Nanso “Onyankopɔn nyɛ sakasaka Nyankopɔn.” (1 Korintofo 14:33) Onyankopɔn mfaa ne ho nhintaw yɛn, na mmom ɔpɛ sɛ yehu no. Yesu kae sɛ: “Yɛsom nea yenim.”—Yohane 4:22.
Marco ka sɛ: “Bere a mihui sɛ Onyankopɔn nyɛ Baasakoro fã no, afei de, mitumi faa no adamfo.” Sɛ yehu sɛ Yehowa mfaa ne nipaban nsiee yɛn, na ɔyɛ obi a yebetumi ahu no yiye a, ɛnyɛ den koraa sɛ yɛbɛpɛ n’asɛm. Bible ka sɛ: “Nea ɔnnɔ no nnim Onyankopɔn, efisɛ Onyankopɔn ne dɔ.”—1 Yohane 4:8.
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN November 2013 | Atosɛm a Ɛmma Nnipa Ntumi Mmɛn Onyankopɔn
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie ƆWƐN-ABAN November 2013 | Atosɛm a Ɛmma Nnipa Ntumi Mmɛn Onyankopɔn